लभको चक्करमा पर्नु हुन्न– आकृति पुन, महिला रेस्लर
उनी सानैदेखि टेलिभिजनमा ‘डब्लूडब्लूई’ हेर्थिन् । त्यतिखेर उनी सोच्थिइन्, ‘म पनि यस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो ।’ रेस्लिङका यिनै प्रशंसक आकृति पुनले यो साता काठमाडौंमा आयोजित
बहुप्रतिक्षीत एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको छ । टेलियासोनेराले एक अर्ब १२ करोडमा किनेको एनसेल १ खर्ब ४४ अर्बमा एक्जियटा
मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धिका बाबजुद सरकारले अपेक्षाकृत गति पक्रन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यो कत्तिको जायज छ ? पहिलो कुरा,
पार्टी एकढिक्का नभएसम्म युगसापेक्ष जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिँदैन- योगेश भट्टराई
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित ग¥यो । विधेयक हेर्दा निकै राम्रो देखिन्छ । तर, प्रतिपक्षी दल र अनशनरत डा. गोविन्द केसी लगातार विरोधमा छन् नि ? यो नियोजित विरोध हो
एनसेल कम्पनी खरिद बिक्री भएको तीन चार वर्ष भयो । यसको पूँजीगत लाभकर असुली हुनुपर्छ भनेर यहाँ कार्यबाहक महालेखा परीक्षक हुँदा धेरै मेहनत गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म असुली हुन सकेको
– नढाँटी भन्ने हो भने, दुईतिहाइ बहुमतसहित यत्रो प्रगतिशील शक्तिले सरकार चलाइरहेको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् । – मुलुकमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हावी छ । राजनीतिक आधारमा गरिने निर्णयहरू (पोलिटिकल
– वरिष्ठ न्यायाधीशबाट दिपकराज जोशीलाई हटाएर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कानुन मिचेका छन् । – न्यायपरिषद्को संरचनामै त्रुटी भएकाले योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्नै सक्दैनन् । – न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । तर,
ठूलो जनसमर्थनसहित बनेको यो सरकारको आलोचना किन भइरहेको होला ?सरकारले कतिपय काम बजेटमार्फत ल्याउँछ या नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याउँछ । कतिपय निर्णयमार्फत पनि ल्याउँछ । र, कतिपय ‘अनगोइङ प्रोग्राम’हरूलाई सरकारले
चर्चित पाश्र्वगायिका मिलन अमात्य अब मिलन नेवारका रुपमा चिनिन चाहन्छिन् । केही समयअघि पति मेन्सन अमात्यसँग डिभोर्स गरेपछि ‘सिंगल’ रमाउँदै आएकी उनी आफ्नो नामबाट ‘अमात्य’ ‘डिलिट’ गर्न चाहन्छिन् । ‘अब
कुनै फिल्मभन्दा कम छैन अभिनेत्री तथा निर्मात्री सोनु थारुको जीवन । थारु समुदायकी यी चर्चित अभिनेत्रीको प्रेम, विवाह र विछोडजस्ता जीवनकथालाई पर्दामा उतार्ने हो भने ‘सुपरहिट’ फिल्म बन्नसक्छ । सोनुले